I-china class 1 class 0 rubber plastic insulation materials abakhiqizi nabaphakeli | CESE2
Ukusebenza okungangenamlilo kwemikhiqizo enjoloba nemikhiqizo yepulasitiki yeClass B1 ihlangabezana ngokugcwele nezidingo zekilasi elinokutsha B1 nangaphezulu okushiwo ku-GB 8627 "Indlela Yokuhlukaniswa Kokusebenza Komlilo Kwezinto Zokwakha". Hlakulela ifomula yokuvikela imvelo eyingqayizivele, okokusebenza esimweni somlilo, ukuhlushwa kwentuthu kuncane, lapho amandla omlilo engeke akhiqize intuthu yomzimba womuntu.
Ukusebenza okuphezulu kokuphepha komlilo
Ubuchwepheshe be-nano micro foam obunikazi, ukuqhutshwa okuphansi kokushisa
Umbala wenjoloba nopulasitiki wokufaka izinto usebenzisa kahle ubuchwepheshe be-nano micro ephathekayo, ukuze ukwakheka kwangaphakathi kwesakhiwo sesikhwama somoya esincane; Isakhiwo sangaphakathi se-bubble esivaliwe ngokuphelele, ukuze i-conductivity eshisayo iphansi futhi izinze, ukusetshenziswa kwesikhathi eside komphumela wokonga amandla kusobala.
Impilo yezemvelo, ikhwalithi yomoya engcono yasendlini
Okungeyona into enobuthi, akukho phunga, akukho fiber, akukho uthuli, akukho i-formaldehyde, i-cyanide nezinye izinto eziyingozi, ukuhlushwa okuphansi kwe-volatilization ephilayo, ukuqinisekisa ikhwalithi yomoya yasendlini engcono.
Ukubukeka okuphezulu, okufana nokuhle
Izinto zokwengeza zenjoloba nezipulasitiki zinemibala ehlukahlukene, ukubukeka okuhle futhi asikho isidingo sokuhlobisa. Ngaphezu kwalokho, imibala ehlukahlukene ingasetshenziselwa ukubona ukuphathwa okubonakalayo kwezinqubo ezahlukahlukene zenqubo nokwenza ngcono umphumela wephrojekthi.
Kulula futhi kuyashesha ukufaka
Impahla ethambile, umbala owenziwe ngezifiso, ukwakhiwa okulula nokufakwa.
Flame cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi class B1, isendlalelo esiyinhlanganisela non esivuthayo isigaba A
Isici sokumelana nomswakama
Vumela ukumuncwa kwamanzi
Izinyembezi zamanzi amandla
Izinga lokubuyiswa kwesibalo (isilinganiso sokucindezelwa 50%, 72h)
Umbimbi kancane, akukho ufa, akukho pinhole, akukho ukusonteka
Ibanga lokushisa elisebenzayo
Langaphambilini I-18W 40W 80W ikhiphe isibani esihlanzekile se-SMD segumbi elihlanzekile
Olandelayo: 70W 100W 150W voltage enkulu LED light-project light
Izinto Zemibala Yenjoloba Yombala
Izinto Zokuvikela Ukushisa
abandayo iphuma steel ikhoyili abandayo iphuma ogcwele kanzima st ...
>> Incazelo yeCold Coolled Steel Coil (CRC) EBANDAYO EJIKISWE NGESIMBI SENSIMBI ikhiqizwa ngokufaka amakhoyili ashubile ashubile bese eyigoqa ngokufanayo endaweni yokushisa ebekelwe ukushuba okuncane. Inokumiswa okuhle kakhulu kwendawo nezinto ezinhle kakhulu zomshini zokusetshenziswa ekukhiqizweni kwezimoto nogesi. Ukucaciswa Okujwayelekile I-JIS G 3141: 2005 SPCCT-SD SPCD-SD, SPCE-SD, SPCF-SD, SPCG-SD ASTM A1008 CS TYPE A / B / C DS TYPE A / B, DDS EDDS EN ...
anti-ngomunwe GL galvalume steel ikhoyili ukufulela ...
I-55% AL-ZN YOKUGCWELE STEEL STEEL iyinsimbi yensimbi eboshwe nhlangothi zombili nge-aluminium-zinc alloy enokwakheka kwengubo, i-55% aluminium, i-43.4% zinc ne-1.6% silicon. Ukumelana okuhle kakhulu kokugqwala kwe-Aluzinc kungumphumela wezinto zezinto ezimbili zensimbi: umphumela wokuvimbela i-aluminium ekhona ebusweni be-coating nokuvikelwa komhlatshelo kwe-zinc. Ubukhulu Ububanzi 0.14 mm - 2.00 mm Ububanzi Ibanga 600 mm - 1250 mm ...
Ipayipi le-PVC lisetshenziswa kakhulu ekwakhiweni kwezimboni kanye nezomphakathi, kufaka phakathi amanzi aphuma ngaphakathi nangaphandle, iphrojekthi yepayipi lendle, uhlelo lokunisela kwezolimo, ipayipi lamakhemikhali, indle, ibuye ifanele ipayipi lokungenisa umoya nepayipi lamanzi, njll. Ipharamitha yobuchwepheshe: Ipayipi le-Flaring (Nge i-apron) S 、 SDR igama langaphandle ububanzi (mm) ubukhulu bodonga (mm) ingcindezi yokuqamba 0.63MPa S16 SDR33 63 2.0 75 2.3 90 2.8 S20 SDR41 110 2.7 125 3.1 140 3.5 160 ...
I-ANGLE STEEL ingakhiwa ngezidingo ezahlukahlukene zezinto ezahlukahlukene zokuxineka ngokuya ngesakhiwo, ingasetshenziselwa ukuxhumana phakathi kwezakhi. Isetshenziswa kabanzi ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokwakha nezobunjiniyela, njengemishayo, amabhuloho, imibhoshongo yokudlulisa, ukuphakamisa nokudlulisa imishini, imikhumbi, iziqukathi, iziko lezimboni, imibhoshongo yokuphendula, ubakaki wekhebula, amapayipi kagesi, ubakaki webha yamabhasi, namashalofu agcinwayo njll. Impahla Isibhakela steel angle ukusetshenziswa ekwenzeni isitoreji r ...
201 202 301 304 316 Zezıhlabane asongwe Engagqwali Engagqwali ...
I-FLAT BAR iyinsimbi engxenyeni yayo engunxande nonqenqemeni olubuthuntu. Kungaba insimbi eqediwe. Futhi ingasetshenziselwa ukushisela i-tube billet kanye nokupakisha ishidi lokugoqa ngesilayidi elincanyana, kungasetshenziselwa ukuphakamisa insimbi, amathuluzi kanye nezingxenye zemishini, ekwakhiweni kwezakhiwo okusetshenziselwa ukufaka isakhiwo senqama, isitebhisi njll. Ukupakisha ngenqwaba noma njengezidingo zamakhasimende Isisindo senqwaba Cishe amathani ama-2 MOQ amathani ama-2 usayizi ngamunye wokulethwa Isikhathi sezinsuku eziyi-15-20 ngemuva kokutholwa ...
engangenwa umlilo yomsindo ezishisayo ukwahlukanisa ingilazi w ...
I-Centrifugal ingubo yoboya yinto e-filamentous eyenziwe ngengilazi encibilikisiwe eyenziwe ngenqubo yokushaywa kwe-centrifugal futhi yafuthwa nge-resin ye-thermosetting, yabe seyiswa ekwelapheni okushisayo nasekucutshungweni okujulile, okungenziwa uchungechunge lwemikhiqizo enokusetshenziswa okuningi, njenge-Glass Cotton ibhodi, i-fiberglass duct, ibhodi yokulungisa umoya, uboya bezingilazi eziphezulu, njll. >> Ukusebenza komkhiqizo namazinga: Ukufakwa kweThermal, ukumuncwa komsindo nokuncishiswa komsindo.